Girl Holds Umbrella for Disabled Old Beggar in RainstormMonday, August 22, 2011 ပန်းနုရောင်နှလုံးသားနှင့် ကောင်မလေး...သဲသဲမဲမဲ ရွာနေသည့် မိုးသက်လေနှင် မုန်တိုင်းဆင်နေဆဲကာလမှာ ပိန်ပိန်ပါးပါး သွယ်လျလျခန္ဓာကိုယ်နှင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက် သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းလုံးရွဲရွဲစိုနေသည့်တိုင်မသန်မစွမ်းဖြင့် 
တောင်းရမ်းစားသောက်နေရသည့် အဘိုးအိုတစ်ဦးအား မိုးရေထဲတွင် ထီးတစ်လက်ဖြင့်သက်သာရာရစေကြောင်း ကာကွယ်ကာမိုးပေးခဲ့ တဲ့ မြင်ကွင်းကတော့ ၀တ္တုဇတ်လမ်းတွေထဲမှာတင်မဟုတ်ပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ တာပါ...ရုတ်တရက်မိုးသည်းထန်စွာရွာလိုက်လို့အသက်အရွယ်ကြီးရင့် ကာခြေထောက်တစ်ဖက်မသန်မစွမ်းဖြစ်နေသူ အဖိုးအိုတစ်ယောက် သစ်သားလှည်းကလေးပေါ်တွင် ခက်ခက်ခဲခဲရွေ့ လျားသွားလာနေခိုက် လှပချောမောသည့် မိန်းမပျိူလေးတစ်ဦး ထီးကလေးတစ်ချောင်းဖြင့် ပြေးထွက်လာကာ ထိုအဖိုးအိုအား သူမခန္ဓာကိုယ်အား မိုးစိုနေသည်ကို အမှုမထားပဲ ထီးမိုးပေးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...စူကျိူးပြည်နယ်မှ အင်တာနက်သုံးသူတစ်ဦးဟာ ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးဖွယ် ထိုအခိုက်အတန့် ကလေးကို ၎င်း၏ကင်မရာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ ပါတယ်...ထိုဓါတ်ပုံအား အင်တာနက်ပေါ်တွင် လာရောက်ကြည့် သည့် အကြိမ်ပေါင်း ၂၄၀၀၀ ကျော်သည်အထိလူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိခဲ့ ပြီး XiCi အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် မျက်နှာဖုံးပုံအဖြစ်ပင် လွှင့် တင်ထားခဲ့ ရသည်အထိဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်... အွန်လိုင်း၊ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကတော့ ထိုမိန်းကလေးအား မိုးသက်မုန်တိုင်းထဲမှ အလှပဆုံးမြင်ကွင်းအဖြစ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလျှက်ရှိနေကြပါတယ်..." ဒုက္ခိတအဖိုးအိုကြီးကို ထီးမိုးပေးပြီးနောက် ပြန်လာတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကျွန်တော့အထင်တော့ ငိုနေခဲ့ ပါတယ်..." လို့ ထိုဓါတ်ပုံကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် တင်ခဲ့ သူက အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ပြောင်းပြောပြကာ အမှတ်တရဆိုပါတယ်...အဆိုပါ နှလုံးသားလည်းလှ၊ လူလည်းလှသည့် မိန်းကလေးအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသိရှိပါကဖုံးနံပါတ် ၉၆၀၆၀ သို့ ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း၊ မိုလ်ဘိုင်းဖြင့် မက်ဆေ့ ခ်ျ ပို့ ၍သော်လည်းကောင်း Sina Weibo မှတစ်ဆင့် Modern Express သို့ သတင်းပို့ အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်...အဆိုးနဲ့ အကောင်းဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာမဆိုဒွန်တွဲနေတာပါပဲ...သည်မိန်းကလေးရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ လေးစားချီးကျူးဖွယ်ရာပါပဲ...ကိုယ်ကျိူးစွန့် အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာ ငွေကုန်ကြေးကျအများကြီးမလိုပါဘူး...နောက်ဆုံးပေါ် အ၀တ်အစား၊ အသုံးအဆောင်၊ မိုလ်ဘိုင်း၊ အိုင်ဖုံး၊ ကွန်ပြူတာ၊ ကင်မရာစတာတွေကိုင်နိုင်၊ သုံးနိုင်ပြီး စိတ်ဓါတ်မမွန်မြတ်သူထက်စာယင် ဒီလိုမိန်းကလေးမျိူးကို ပိုပြီးအထင်ကြီး၊လေးစား
မိတာပါပဲ...ရွှေပြည်သူညီမငယ်၊ အစ်မများလည်း အားကျအတုယူနိုင်ပါစေသတည်း...
စေတနာလည်းလှ၊ လူလည်းလှတဲ့ ကောင်မလေးက ဒုက္ခရောက်နေသူကို ထီးမိုးပေးနေခိုက်ကူညီပါရစေ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသည့် အမျိူးကောင်းသားက မိုးလုံလေလုံနေရာမှကြောင်တောင်ကြည့် နေခဲ့ ပါတယ်... A girl in pink holds an umbrella foradisabled elderly person, whileauniformed man looks on from the side in the photo.
သူမတစ်ကိုယ်လုံး မိုးရေတွေရွှဲစိုပါစေ....အမှုမထားပဲ အဖိုးအိုကိုသာ သနားကရုဏာကြီးစွာဖြင့် ဖေးမကူညီခဲ့ ပါတယ်...A girl in pink holds an umbrella foradisabled elderly person, the girl already thoroughly soaked.
ပန်းနုရောင်အင်္ကျီ၊ ပန်းနုရောင်နှလုံးသားနဲ့ ကောင်မလေးက ဒုက္ခတအဖိုးအိုကို မိုးသည်းထဲမှာထီးမိုးပေးခဲ့ တာပါ...A girl in pink holds an umbrella foradisabled elderly person. ဒီကမလာတာ..ကိုပီတာကြီးကျန်းမာပါစေ
kosaiAugust 30, 2011 at 1:41 PMအလွန်စိတ်ထားမြတ်တဲ့ကောင်မလေးပါပဲဗျာ.......ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာဗျာစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေတော်တော်ရှားလာပြီ။။။။။။။။။လာရောက် ကြည့်ရှုတဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ......အတုယူနိုင်ကြပါစေဗျာ....''ကိုစိုင်း''ReplyDeleteAnonymousAugust 30, 2011 at 5:38 PMကျနော် မြန်မာပြည်က ကျောက်ဆည် gtc ကကျောင်းသူလေးကိုသတိရတာဗျာ။အဲလိုပဲ တောင်းရမ်းနေတဲ့ အဘွားအို ကို စားစရာဝယ်လာပြီး မိခင်ကိုကျွေးသလိုမျိုး ရိုရိုသေသေ ထိုင်ကျွေးတာကိုမြင်ဖူးတယ်။အတော်လေး ခံစားမိတယ်။ကျောင်းသူဝတ်စုံလေးနဲ့ လက်၂ဘက်နဲ့ အသေချာပေးပြီးကျွေးနေတာ။ဓါတ်ပုံတော့မရှိဘူးရှားပါးဖြစ်ရပ်ပါ ပထမဆုံးမြင်ဖူးပါတယ်။ ခုခေတ်လို အနေမျိုးမှာပေါ့။၂ နှစ်လောက်တော့ကြာပါပြီ။ReplyDeletehlahtooSeptember 1, 2011 at 2:50 AMဒါမှ တစ်ကယ် လေးစားထိုက်သည့် နှစ်လုံးသားပိုင်ရှင် လေးပါ။ReplyDeletethiha yadanarSeptember 2, 2011 at 11:02 AMအတုယူစရာပါပဲ တင်ပေးတဲ့လူကိုလဲကျေးဇူးဗျာReplyDeletejitpasekounglaySeptember 3, 2011 at 2:58 AMအင်း ဒုတ်ကြီးရေ ကောင်လေးဝင်ကြည့်သွားတယ် ဒီ post လေးကို အရမ်သဘောကျတယ် အဲကောင်မလေးကတကယ်လေးစားထိုက်ပါတယ် ။ReplyDeletesoe htet kyawApril 25, 2013 at 7:46 PMအင်းဟုတ်တယ်ဒါမျိူးကလူတိုင်းလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး.........ReplyDeleteAnonymousMay 3, 2013 at 9:29 PMkyawthan htay said.....ို့တကယ်ပါဗျာ.. ကျွန်တော်သူမက်ို အင်မတန်မှချီးကျုးပါတယ် သာဓုလည်းခေါ်ပါတယ် ဒ်ါကမြန်မာတွေအတုယူထိုက်ပါတယ်ReplyDeleteAnonymousMay 21, 2013 at 7:09 AMကြည့်ရမြင်ရတာအရမ်းစိတ်ချမ်းမြေ့ဖို့ကောင်းပါတယ်။တင်ပေးတဲ့သူကိုလည်းကျေးဇူးပါ။ReplyDeleteAnonymousJune 10, 2013 at 2:10 PMကောင်းပါတယ်အများအကျိုးရွက်သယ်ပိုးကခနိုခနဲ့ဆိုကဲရဲ့လည်းမဖဲ့မစောင်းကိုယ့်လမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကောင်းနှင်ရှင်ရှေးရှုးနှင့်လေားReplyDeleteAnonymousJune 15, 2013 at 12:05 AMကောင်း မ လေး ကော က ဗျာ ကို ကော ကြိုက် တယ် ဗျာ။ ဘ၀ မှာဒီလို လှ ပ မှု့ တွေ ကို ကိုယ် မ လုပ် နိုင် လည်း တွေ့ ရ ပါ စေ ဗျာ။ReplyDeletenayminJuly 12, 2013 at 12:42 AMချီးကျူးထိုက်ပါတယ် တော်တော်လဲလေးစားဖို့ ကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်ပါအဲလိုစိတ်ထားရှိတဲ့ သူတွေရှားပါးနေတဲ့ မချိန်မှာ မြင်လိုက်ရတော့ တော်တော်လေးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် တက်နိုင်သမျှအားနည်းသူကိုကူညီတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ အဲအမလေး သက်ကျော်ရာကျော်ရှည်ပါစေဗျာReplyDeleteAnonymousJuly 19, 2013 at 5:24 PMသူ့ရဲ့လုပ်ရပ်က ကိုယ့်ကိုပီတိဖြစ်စေသလိုကိုယ့်ပီတိကဖြစ်လာတဲ့ ဆုတောင်းကြောင့်ထိုမိန်းကလေး လိုချင်တဲ့ဆုပြည့်ပါစေဗျာ။ReplyDeletemoehnin thetJuly 24, 2013 at 1:06 AMတော်တော်ကူညီချင်တဲ့ ကူညီပါရစေတွေနော်ဒါကြောင့်လည်း သူတို့က ကုလ လုံခြုံရေးကိုထမ်းဆောင်ဖို့ အဆင့် မမီကြတာပေါ့ReplyDeletesaisailin833@gmail.comJuly 27, 2013 at 3:50 PMကူညီပါရစေကသူ့ဝမ်းကိုသူပြောတာတခြားလူတွေကိုကူညီမယ်လို့အထင်မှားပြီးလျှောက်မရေးကြေးReplyDeleteAnonymousAugust 8, 2013 at 8:23 PMဒို.ဆီမှာလည်းရှိခဲဘူးပါတယ် ပဒုမ ပေါင်တိုဆိုတာလေ ကူညီပါရစေတွေက သူတို.ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကနေ ကူညီနေပါတယ် ကုလမှိမမှိတော.မိုးနှင်းလေးလက်တွေစမ်းကြည်.လေ မိုးနှင်းလေးကိုသီးသန့် ကူညီချင်တယ်ReplyDeleteye mhanSeptember 25, 2013 at 6:26 PMတရုပ်ပြည်ကပါဟReplyDeleteAdd commentLoad more...
ကိုရီးယားမလေးရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အာသာပြေ
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် updater Version-Facebook v24.0.0.0.5 alpha apk